U-Elizabeth Boyarskaya noMaxim Matveyev bahlukana
Ngandlela-thile le ntwasahlobo icebile ekuqhawuleni kwemibhangqwana eqaqambileyo kwi-movie yemidlalo. Kwaye inyanga ayizange idlule ukususela kwithuba apho uFedor Bondarchuk nomkakhe uSvetlana bhengeze isigqibo sabo sokuqhawula umtshato, kwaye ngoku, ukwahlukana okulandelayo. Ngeli xesha ibhokotshi yasekhaya ka-Elizaveta Boyarskaya noMaxim Matveyev abakwazanga ukuma.
Esi sibini asisayi kubhalisa ngokusemthethweni umtshato kunye nokubika malunga noko kwenzekayo. Njengoko uyazi, yonke iminyaka emihlanu yobomi bentsapho u-Elizaveta Boyarskaya noMaxim Matveyev bahlala kwizixeko ezimbini-eMoscow naseSt. Petersburg. Ngoku umdlali we-actress uhlala eSt. Petersburg ngeenyanga eziliqela, kwaye umyeni wakhe wahlala kwisikhululo. Iindaba zakutshanje ukuba isibini saqhekeza, sathi namhlanje i-StarHit ithebhu.
UMikhail Boyarsky ngokuchasana no-Elizabeth kunye noMaxim
Kwi-drama yaseSt. Petersburg, apho u-Elizabethe esebenza khona, iilatheli ziqinisekisile ulwazi. Ukukhonza i-MDT uSergey Turuntsev uthe idibiliki yaqhekeka ngaphandle kwama-scandal and quarrels, ngokuvumelana ngokuvumelana. U-Elizabeth akazange afihlele oogxa bakhe utshintsho ebomini bakhe. Nangona kunjalo, abalandeli baye baqaphela ixesha elide ukuba uBraarskaia uya ezweni ngaphandle komngcingo womtshato, kwaye umyeni wesenzo somdlali akazange afike kumhla wokuzalwa wama-30.
Esi sibini siye safuna ukuqhawula ngokusemthethweni, kodwa uyise owaziwayo u-Elizabethe wayechasene nomtshato. Ngokutsho koogxa be-actress, uMikhail Boyarsky akafuni ukutshabalalisa umfanekiso wentsapho yakhe efanelekileyo.
Ukongezelela, "i-musketeer" enkulu inethemba lokuba isibini siya kukwazi ukunqoba i-crisis in the relationship, kwaye siya kuphinda kwakhona.
UDmitry Shepelev utshela unyana wakhe ngoZhanna Friske imihla ngemihla, iifoto ezintsha
USergei Zverev ukwesaba ngobomi bomhlobo wakhe uTimati
U-Ekaterina Andreeva wamangaliswa yindlela entsha
Imali yencwadi malunga noZhanna Friske Shepelev iya kudluliselwa kwisiseko sokunceda
Ukulondolozwa kwentsapho emva kokuzalwa komntwana
I-Satsivi i-arubergines ne-walnuts
Amatshontshi ashushu kunye nenkukhu kunye ne-apricot sauce
I-Lactose ekudleni kwezingane
UTutta Larsen watshata
Iintlobo zabenzi bokuzicoca
I-choker-necklace: iimpawu ezimangalisayo ezivela ku-Yana
ICarrot neCoconut Pie
Izindlela zokucoca isibindi ekhaya
Ukufakelwa kwamazinyo: izibonakaliso kunye nokuchasene